Fianarantsoa : 28 ireo olona voasambotry ny FIP, 7 kosa ny olona maty
lundi, 09 janvier 2017 17:54
28 ireo olona voasambotry ny mpitandro filaminana eo anivon'ny Polisin’ny FIP Fianarantsoa tao anatin'ny fidinana miisa 23 nataony teo anelanelan'ny volana jolay 2016 ka hatramin'ny desambra lasa teo.
7 kosa ny olona maty ka ny 2 tamin'izany dia ireo dahalo tratra tao Soaindrana Distrikan'i Vohibato izay niharan'ny hatezeran'ny Fokonolona.
50 no isan'ny antso nataon'ny olontsotra ho famonjena azy ireo nandritra izay vanim-potoana izay, ny 10 tamin'ireo fidinana ifotony no tsy nazahoam-bokatra.
Ho an'ireo haza azo tsapain-tanana dia isan'ireo dahalo voasambotra ny fiandohan'ny taona teo ilay antsoin'ny mpiara-monina hoe : "Desta", izay mipetraka sy malaza ratsy amin'ny halatra omby ao Anjoma Ambalavao. Tao anaty lisitra mainty izy io fa ny fampahafantarana avy amin'ny Fokonolona no nahafahana nanambotra azy.
Eo ihany koa ireo basy tratra teny amin'ny olona mampiahiahy. Miisa 5 ireo azo tao anatin'ny enim-bolana faharoa ny taona 2016 ka isan'izany ny fitaovam-piadiana tsy misy taratasy ara-dalàna hita tao Ambalavao ihany ny voalohan'ny volana janoary ity.
Ny afera niakatra Fampanoavana izay nosahanin'ny FIP tao amin'ireo vokatra ireo dia mitontaly 8. Ny omby halatra tafaverina kosa dia 44.